Manatsara ny famolavolana mailaka hisintomana ny sain'ny mpamaky anao | Martech Zone
Manatsara ny endrika mailaka hisintomana ny sain'ny mpamaky anao
Alarobia, Novambra 5, 2014 Douglas Karr
Volana vitsivitsy lasa izay tamin'ny fihaonambe iray dia nijery fampisehoana mahaliana momba ireo dingana ataon'ny mpamaky mailaka rehefa milentika ao anaty mailaka azon'izy ireo. Tsy io ny làlana izay inoan'ny ankamaroan'ny olona ary tena tsy mitovy amin'ny tranonkala iray. Rehefa mijery mailaka ianao, dia matetika no jerenao ireo teny voalohany amin'ilay andalana ary angamba topy maso fohy momba ny atiny ao anatiny. Indraindray, eo no mijanona ny mpanjifa. Na azony atao ny manindry ny mailaka ary manokatra azy - mampiseho ny ampahany ambony amin'ny mailaka azo jerena ao amin'ny mpanjifan'ny mailaka. Ary avy eo, raha voasintona ny sain'izy ireo, dia mety hidina ambany izy ireo. Ho an'ny mpanjifa sasany, misy aza ny dingana tsy anelanelany raha maniry ny hijery ireo sary izy ireo na tsia - saingy mino aho fa miala tsikelikely ny fihetsika.
izany sary avy amin'i Emma mamakivaky ny sasany amin'ireo antsipiriany manan-danja amin'ny mailaka iray izay mitondra ny mpamaky amin'ny fahalianana amin'ny fahalalany lalina. Mahatsapa fihetsem-po, mampiasa olona amin'ny sary, mifantoka amin'ny loko sy ny fotsy mba hisarika ny maso tsy hijery hetsika… ireo zavatra rehetra ireo dia azo ampidirina mba hampivelatra kokoa ny fisokafanao ary tsindrio miaraka amin'ny mpamandrinao.
Tiako indrindra ny fanamarihan'izy ireo tamin'ny loko, na izany aza, ary ampihariko amin'ny tsirairay amin'ireo tsiambaratelo 12 ireo!
Samy hafa ny mpihaino rehetra, noho izany zava-dehibe ny fanaovana fitsapana vitsivitsy hahitana…
Nahita valiny tsy mampino izahay tamin'ny alàlan'ny mailaka mandika efa ela izay tsy dia nisy sary firy, ary ireo mailaka hafa izay sary lehibe iray natolotra miaraka amina rohy fotsiny. Miankina amin'ny mpihaino anao izany, ny haavon'ny sain'izy ireo, ny antenain'izy ireo handraisana ny mailakao, ary ny fizotran'ilay tsingerin'ny hetsika misy azy ireo. Angamba maniry ny hamaky famaritana lava momba ny fanoloranao izy ireo, na vonona ny hanindry bokotra iray ary misoratra anarana. Tsy ho fantatrao raha tsy manandrana fitambarana hafa ianao. Ary aza gaga raha tsy vahaolana tokana ny refy. Imbetsaka ianao no hahita valiny tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fizarana sy fizahan-toetra ny fiovaovana samihafa amin'ireo mpamandrika.
Tags: tsarafamolavolana mailakainfographic mailakaEmmaatidohamy emmamyemmaPsychology
TRANO: Sambory sy refeso ny firotsahan'ny mpampiasa amin'ny hetsika manaraka
Alao haingana kokoa ny votoatinao miaraka amin'ireo torohevitra momba ny fitantanana sary